Fantaro i Margaret Noodin, mpitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron’ny 25-31 jolay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2019 7:35 GMT
Amin'izao taona 2019 izao ao anatin'ny fanentanana media sosialy hanandratana ny fimaroam-piteny antserasera, mifandimby ireo Amerikana teratany sy avy amin'ny Firenena Voalohany mpikatroky ny teny sy mpanandra-teny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech hizara ny zava-niainan-dry zareo amin'ny famelomana aina indray sy ny fampahafantarana n fiteny Amerikana Teratany sy Firenena Voalohany. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Margaret Noodin (@OjibweNet) sy izay kinasany horesahana mandritra ny herinandro itantanany izany kaonty izany.
Mpiteny sy mpampianatra Anishinaabemowin avy any Minnesota tamin'ny voalohany fa mampianatra eto Wisconsin kosa amin'izao fotoana izao aho. Renin'ny zanakavavy roa mamirapiratra izay mandefa lahatsoratra ahy amin'ny teny Anishinaabemowin aho. Profesora amin'ny fampianarana teny anglisy ny amerikana indiana ihany koa aho ary talen'ny Electa Quinney Institute for American Indian Education. Ny bokiko Bawaajimo: Fitenim-paritry ny Nofy amin'ny fiteny sy ny literatiora Anishinaabe dia mifantoka tantara antsoratry ny mpanoratra Anishinaabe ary ny Weweni dia angon-tononkalo teniroa amin'ny fiteny Ojibwe sy Anglisy. Any Milwaukee aho miasa miaraka amin'ny Sekolim-piarahamonina Indiana, ny Foibe ara-tontolo iainana an-tanandehibe ary ny Milwaukee Water Commons ho fanohanana ny hevitry ny tompontany sy ny fomba fiainana ao an-tanàna. Miaraka mihira amin'ny Miskwaasining Nagamojig (mpihiran'ny honahona) tarika vehivavy mpively ampongamaroanaka sy amin'ny Minowakiing Chibizhiwag (Panthera Milwaukee) izay manana tononkira amin'ny teny Anishinaabemowin (Ojibwe) aho.